Turjubida luqadaha kale - 1177 Vårdguiden
Turjubaan wuxu haystaa sir haynta shaqada, tani micnaheedu waa in turjubaanku aanu bixin karin macluumaad kugu saabsan oggolaanshahaaga la'aanteed. Qaraabada iyo asxaabta turjumaysa ma laha sir haynta shaqada.
Qaababka kala duwan ee kulanka turjubaanka
Turjubaan waa inuu turjumo waxa shaqaalaha caafimaadku sheegayaan si aad u fahamto macluumaadka oo aad raad ugu yeelan karto daryeelkaaga caafimaad. Waxa aad xaq u yeelan kartaa turjubaan luqada ah marka aad kulan la leedahay cid ka tirsan daryeelka caafimaadka iyo bukaanka, ama dhinaca daryeelka ilkaha.
Kulan leh turjubaan wuxu u dhici karaa qaabab kala duwan:
Turjubaan ayaa joogi kara xilliga la kulanka shaqaalaha caafimaadka.
Turjubaan ayaa kulanka kaga qayb qaadan kara dhinaca telafoon sameecad leh.
Mararka qaarkood waxa kale oo jirta fursad in turjubaanku ku turjumo iyadoo la isticmaalayo waxa lagu sheego turjumida fiidyowga. Adiga, shaqaalaha caafimaadka iyo tujubaanku waxa aad markaasi ku xidhiidhaysaan dhinaca kamarad iyo kombiyuutar.
Haddii aad tihiin dhowr qof oo isku luqad ku hadla oo helaya macluumaad isku mid ah waxa aad heli kartaan turjubaan kooxeed. Turjubaan ayaa markaasi macluumaadka u turjumaya kooxda oo dhan. Tani waxay tusaale ahaan noqon kartaa marka dhowr waalidiin ahi ay ku kulmayaan xarunta daryeelka caafimaadka caruurta.
Weydii shaqaalaha caafimaadka nooca turjubaan ee aad heli doontid.
Waxa aad isticmaali kartaa khariidadan luqadaha si aad u muujiso nooca luqada ee aad u baahantahay.
U sheeg shaqaalaha caafimaadka
U sheeg shaqaalaha caafimaadka inaad turjubaan u baahantahay marka aad ballansanayso booqashadaada ama wakhti fiican ka hor. U sheeg xitaa luqada ay tahay. Badanaaba shaqaalaha caafimaadku way ballamiyaan turjubaan.
Haddii aanad iman karin ballantaada daryeelka caafimaadka waa la baajinayaa turjubaanka. Maamulada caafimaadka ee gobolada qaarkood, adiga ayaa bixinaya kharashka turjubaanka haddii aanad ballantaada baajin. Sida ballan baajintu u dhacdo kala duwanaansho ayaa u dhaxaysa maamulada caafimaadka ee gobolada. Weydii shaqaalaha caafimaadka ee ballaminaya turjubaanka sida ay wax u shaqeeyaan.
Ma la turjumo macluumaadka qoran
Turjumaanadu badanaaba waxay turjubaan wixi lagu hadlay ee maaha qoraalka. Halkan 1177.se waxa ku jira warbixino ku qoran luqado badan, oo ay ka mid tahay cudurada caruurta iyo sida daryeelka caafimaadku u shaqeeyo.